इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्यामसंग चेल्सी पराजित — Imandarmedia.com
१संसद पुर्नस्थापना भएको २४ घण्टापछि ओलीले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया, प्रचण्ड-नेपाल फायर
२प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटि बैठक सकियो, भए यस्ता निर्णय
३प्रचण्ड-नेपाललाई ओलीले भने- मेरा भाइहरुले लड्डु खाएछन्
४बुढ्यौली र खानपानको सम्बन्ध
५डाइटिङको साइड इफेक्ट, शरीरले दिन्छ यस्तो संकेत
६१५ चैतदेखि त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक १८ घण्टा मात्र खुल्ने
८आज नेपाली बजारमा घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
९प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा दिन तयार, स्थायी समिति बैठकले गर्यो यस्ता निर्णय
१०बालुवाटरदेखि सितलनिवाससम्म तरंग पैदा हुनेगरी प्रचण्ड–नेपालले देउवालाई पठाए यस्तो सन्देश
११दिल्लीमा उपचाररत डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालबाट आयो यस्तो जानकारी
१२नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्दै, के गर्लान ओली ?
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्यामसंग चेल्सी पराजित
एजेन्सी । प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्यामसँग चेल्सीले हार ब्यहोरेको छ । चेल्सीले वेस्ट ह्यामसंग ३–२ को पराजय ब्यहोरेको हो । ब्राजिली स्टार विलियनमले दुई गोल गरे पनि चेल्सीले हार जोगान सकेन । उनले खेलको ४२ औं मिनेटमा पेनाल्टीमा चेल्सीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
हिलो हाफको ईन्जुरी समयमा टोमस सौसेकले घरेलु टोलीका लागि बराबरी गोल फर्काए । माईकेल एन्टोनियोले ५१ औं मिनेटमा गोल गर्दै वेस्ट ह्यामलाई २–१ को अग्रता बनाएको थियो । पुनः विलियनले ब्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दैै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । खेल सकिन एक मिनेट अघि एन्ड्री यरमालेन्कोले वेस्ट ह्यामका लागि विजयी गोल गरे ।
बैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान छिरेका उनले काउन्टरमा गोल गर्दै उनले जित दिलाएका थिए । चौथो स्थानमा ५४ अंक जोडेर बसेको चेल्सीलाई म्यान्चेष्टर युनाईटेड र उल्भ्सले ५२ अंक सहित पछ्याईरहेका छन् । वेस्ट ह्याम भने ३० अंक सहित तालिकाको १६ औं स्थानमा छ । उता सिरि ए फुटबल अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा ईन्टर मिलानले फराकिलो जित हात पारेको छ ।
गएराति इन्टरले घरेलु मैदानमा ब्रेसियालाई ६–० ले गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । ईन्टरको जितमा एस्ले योङ, एलेक्सिस साञ्चेज, डेनिलो डी आम्ब्रासियो, रोबर्टो गाग्लियार्डिनी, क्रिस्टियन एरिक्सन र एन्टोनियो क्यानड्रेभाले एक एक गोल गरेका थिए ।
जितसंगै इन्टर तेस्रो स्थानमा थप मजबुद बनेको छ । क्लब सिरि एको उपाधि होडमा यथावत छ । इन्टर शीर्ष स्थानको युभेन्ट्स भन्दा ८ अंकले पछि छ । तालिकाको पुछार रहेको ब्रेसिया २५ अंकसहित रेलिगेशनको दबाब खेपिरहेको छ ।
यसैबीच क्यारेबियन टोली वेष्ट इन्डिज क्रिकेटका लिजेन्ड सर एभरटन विक्सको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । विक्सको बिहीबार बिहान निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
विक्सले ४८ टेस्टमा ५८.६१ को औसतमा ४ हजार ४ सय ५५रन बनााएका थिए । उनी ५ टेस्टमा लगातार शतक बनाउने ब्याट्सम्यान समेत हुन् । इन्डिजका ‘थ्री डब्लुएस’ मध्येका एक हुन् । इन्डिजका थ्री डब्लुएसमा विक्ससँगै क्लेडे वालकोट, र सर फ्राङ्क वारेल पर्छन् ।
‘हामीले हाम्रा आइकन गुमाएको खबर सुन्दा मन दुखेको छ । लिजेन्ड, हाम्रो हिरो,’ क्रिकेट वेष्ट इन्डिजले भनेको छ, ‘उनको परिवार, आफन्त र विश्व भरका उनका समर्थकलाई हार्दिक समवेदना ।’
टेस्ट इतिहासमा विक्स २० इनिङ टेस्ट खेल्ने खेलाडीमध्ये १० औं सबैभन्दा बढी एभरेज रन बनाउनेमा पर्छन् । विक्स, वाल्कोट र फ्राङ्क वेष्ट इन्डिजले सन् १९५० मा इङ्ग्ल्यान्ड टेस्ट जित्दा महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा टीममा थिए ।
अहिलेसम्म सर्भाइभ राख्न सफल पुरानो पुस्ताका टेस्ट क्रिकेटरमध्ये विक्स तेस्रो खेलाडी हुन् । उनीभन्दा पनि सिनियर खेलाडीहरु दक्षिण अफ्रिकाका जोन वाट्किङ्स र इङ्ग्ल्यान्डका डोन स्मिथ ९७ वर्षको उमेरमा दैनिकी चलाइ रहेका छन् । खेलाडी, प्रशिक्षक, क्रिकेट कमेन्टेटर गरि सबै भूमिकामा रहेर उनले विश्व क्रिकेटलाई ठूलो योगदान दिएका थिए ।
बार्बाडोसका विक्सले सन् १९४८ मा टेस्ट डेब्यु गरेका थिए भने १९५८ मा सन्यास लिएका थिए । विक्स यसअघि २०१९ मा हृदयघातका कारण अस्पताल भर्ना भएका थिए । वेष्ट इन्डिज क्रिकेटका अध्यक्षले विक्स इन्डिजका लागि पायोनियर रहेको बताएका छन् ।